फेब्रुअरीको अन्तिमबाट जापानले विदेशीहरुलाई प्रवेस अनुमति दिने – Eps Sathi
फेब्रुअरीको अन्तिमबाट जापानले विदेशीहरुलाई प्रवेस अनुमति दिने
February 12, 2022 333
जापानले विदेशीहरुका लागि लगाउँदै आएको प्रवेश प्रतिबन्धलाई विस्तारै खुलाउने संकेत गरेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदाले शनिवार सरकारको अहिले लागू गरिरहेको कडा प्रतिवन्धलाई खुकुलो पार्ने योजना रहेको बताएका छन। जापानका स्थानिय संचार माध्यमहरुले यस सम्बन्धि सरकारको घोषणा अर्को हप्ताको सुरुवाततिर आउने बताइरहेका छन।
“हामीले विश्वभर फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको बारेमा बैज्ञानिक ज्ञानहरु लिएर यस बारेमा सोच बिचार गर्नुका साथै अहिले देशभित्र तथा देशबाहिरको संक्रमणको स्थितीलाई अध्यन गरि अन्य देशहरुले लागू गरेका इमिग्रेशन नियमहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै नयाँ निर्णय गर्न लागेका छौं।” टोकियोको हानेदा विमानस्थल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री किसिदाले संचारकर्मिहरुलाई बताए।
किसिदाको यो भनाई जापानको दैनिक आर्थिक पत्रिका निक्केइले जापानले प्रवेश प्रतिबन्धमा गरिरहेको कडाईलाई खुकुलो पार्न लागेको सम्बन्धि खबर रिपोर्टिङ गरिसकेपछी आएको हो। जापानले विस्तारै व्यापारी तथा विदेशी विध्यार्थीहरुलाई प्रवेश दिने योजना बनाएको छ। जापानले प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रवेशका लागि प्रतिक्षारतहरु १ महिनादेखि तनावमा रहेका थिए।
जापानमा नोभेम्बर महिनाको अन्तिमतिर पहिलो पटक कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखा परेसँगै बोर्डर बन्द गरिएको थियो। त्यस यता पटक पटक यो प्रतिबन्धलाई थप गरिदै लगिएकोमा अन्तिम पटक थपिएको म्याद फेब्रुअरीको अन्तिममा सकिँदै छ। यो म्याद सकिनुअघि जापान सरकारले दैनिक १ हजारको संख्या नबढ्ने गरि प्रवेश अनुमति दिने योजना बनाएको छ।
विध्यालय तथा कम्पनीहरु जसले विदेशीहरु स्पोन्सर गरि भित्राएका हुन्छन तिनिहरुको बन्दोबस्त तथा स्वास्थ हेरचार उक्त कम्पनी वा विध्यालयले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। जापान प्रवेश भएपछि उनिहरुले अनिवार्य रुपमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ। त्यसैगरी विजनेश भिजामा प्रवेश गर्नेहरु छोटो समय अवधिको भिजा तथा लामो अवधिको भिजा दुबै प्रकारको भिजालाई खुकुलो बनाउन लागिएको छ।
Prevकृषि ज्ञान सिकाउन बाणगंगा नगरपालिकाले ५०० जनालाई कोरिया पठाउने
Nextधूलोले ढाक्यो कोरिया, कहिले सम्म रहन्छ त यो? कसरी जोगिने धूलोबाट?
कोरियामा मे महिनासम्म अण्डाको मूल्यले आकाश छुने प्रक्षेपण
कोरियाले थप ४ करोड डोज फाइजर कम्पनीको खो’प ल्याउने
क्वारेन्टीन नियम पालना नगर्नेे ७ विदेशीलाई कोरियालेे गर्यो देश निकाला